Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 31
Azo atao nefa zara raha jerena ny mijery ny ho avy. Azo atao fa azo jerena ao amin'ny pejy maro ny tantara. Momba ny maha-izy azy izay tsy maintsy mamaritra ny fahaizan'ny tena sy ny fahaizanao tsara. Ny sakaiza dia tsy hanoro iray hafa hiezaka ny hijery ny ho avy. Izay mijery ny ho avy tsy hiandry torohevitra. Toa izy. Fa an'ireo izay mijery ny ho avy, vitsy no mahalala ny zavatra jereny. Raha mijery sy mahita izy ireo dia vao ny lasa no lasa lasa lasa mahalala an-dry zareo rehefa hitany. Raha misy mahita ny ho avy, dia tsy misy fahavoazana manokana amin'ny fanohizany hatrany, na dia vitsy aza ireo afaka mahazo tombony amin'ny fandidiana. Ny loza dia tonga saika tsy dia maminany mialoha izay heverin'ny mpijery izay hitany.
Raha misy mahita na mijery ny ho avy dia manao izany amin'ny masony, izany hoe ny hakingan-tsainy; na miaraka amin'ny fahaizany, izany hoe ny fahaizan'ny saina; ary tsy misy atahorana manokana hanao izany, raha tsy maka fanahy izy mba hampifangaro an'izao tontolo izao izay ahitany amin'ity tontolo ara-batana ity. Rehefa manandrana milaza mialoha ny fisehoan-javatra ho avy eto amin'ity tontolo ity amin'ny izay hita any amin'ny tontolo hafa izy dia lasa misavoritaka; tsy afaka mitantara izay hitany izy ary mifanaraka amin'ny toerany ao anatin'ity tontolo ara-batana ity; ary izany dia na dia tena nahita marina tokoa aza izy. Ny faminaniany dia tsy azo ianteherana rehefa ampiharina amin'ny fisehoan-javatra amin'ny ho avy eto amin'ity tontolo ara-batana ity, satria ireo dia tsy mitranga araka ny nambara mialoha, na tamin'ny fomba, na tamin'ny toerana. Izay mahita na manandrana mijery ny ho avy dia ny zaza mahita na miezaka mahita zavatra momba izany. Rehefa afaka mahita ilay zaza dia faly be, fa diso hadisoana eo amin'ny fahazoana azy sy ny fitsarana ny zavatra hitany. Tsy afaka mankasitraka ny fifandraisana na ny halaviran'ny zavatra. Ny elanelana dia tsy misy ho an'ny zaza. Hiezaka ny hamantatra ny chandelier amin'ny fahatokisana be loatra izy rehefa mitazona ny oron-dreniny izy ary tsy mahatakatra ny antony tsy hahatratrarana ny chandelier. Ny olona mijery ny ho avy dia mahita toe-javatra sy zavamaniry efa ho avy, satria tsy manana fitsarana izy mikasika ny fifandraisana misy eo amin'ny tontolo izay ahitany azy sy ny tontolo ara-batana ary noho izy tsy mahavita tombanana ny fotoana eo amin'ny tontolo ara-batana izay mety hitranga amin'ny fifandraisana amin'ny fotoana itodihany. Tanteraka ny faminaniana maro, na dia tsy araka ny nambara mialoha foana aza. Tsy fahendrena noho izany ny miankina amin'ny faminaniana ireo izay manandrana mijery ny ho avy amin'ny alàlan'ny fampiasana clairvoyance na fihetseham-po hafa, satria tsy afaka milaza hoe iza amin'ireo faminaniana ireo no marina.
Ireo izay miankina amin'ny faminaniana izay avy amin'ny antsoina hoe "fiaramanidina anatiny" na "fahazavana astral," dia very ny iray amin'ireo zon'ny maha-sarobidy azy, izany hoe ny fitsaràn'izy ireo manokana. Fa, na dia misy hadisoana maro azon'ny olona atao amin'ny fiezahana mitsara zavatra sy fepetra ho an'ny tenany, izy ihany no hitsara araka ny tokony ho izy, amin'ny alalany mianatra, ary mianatra amin'ny fahadisoany izy; raha toa ka mianatra hiankina amin'ny faminaniana hafa izy dia tsy hitsara araka ny tokony ho izy mihitsy izy. Izay manambara zava-mitranga ho avy dia tsy manana antoka momba ny fahatongavan'izy ireo araka ny efa nambara mialoha, satria ny heviny na ny fahaiza-manao izay noforonina dia tsy misy ifandraisany amin'ny eritreritra na fahaiza-miaina hafa. Ka izay mahita na maheno ihany, ary tsy tonga lafatra, ary izay manandrana maminavina izay hitany na henony, dia mety ho marina amin'ny lafiny sasany, fa mba hampifangaro ireo izay miankina amin'ny faminaniany. Ny fomba tokana ahafahana maminany mialoha ny zava-mitranga ho avy dia ny olona mieritreritra hoe manana fahaiza-misaina na mahay ny fahaizany; Amin'izany toe-javatra izany dia mifandraika amin'ny hafa ny toe-tsaina na ny fakampanahy ary ho vita tanteraka ny rehetra ka azo ampiasaina tsara araka izay vitany izay ahafahan'ny olona iray mampiasa ny sainy amin'ny asany sy ny fifandraisany amin'ity tontolo ara-batana ity.
Ny ampahany lehibe indrindra amin'ny fanontaniana dia hoe: Mety ve? Amin'ny toe-piainan'ny olombelona ankehitriny dia tsy mety izany, satria raha misy afaka mampiasa ny saina anatiny ary manazava azy ireo amin'ny toe-javatra sy ny toe-javatra iainan'ny tontolo ara-batana, dia hanome tombony tsy rariny izy eo amin'ireo olona izay iainany. Ny fampiasana ireo atiny anaty dia ahafahan'ny lehilahy mahita izay efa nataon'ny hafa; ny fijerena izay azo antoka fa hitondra valiny sasantsasany satria ny fampidinana baolina amin'ny rivotra dia hianjera. Raha nisy nahita ny baolina nidina sy afaka nanaraka ny làlin'ny sidin-dresaka izy ary nanana traikefa, dia afaka tombanana mazava tsara ny toerana hahalavoany. Ka raha afaka mampiasa ny saina anatiny mba hahitana izay efa natao teo amin'ny tsenambola na amin'ny faribolana ara-tsosialy na amin'ny raharaham-panjakana dia ho hainy ny manararaotra ny zavatra tsy nokitaina mba ho mitokana, ary afaka mamolavola endrika ny zavatra nataony mba hahasoa ny tenany na ireo olona tiany. Izany no mahatonga azy ho lasa talen'ny fitondram-panjakàna ary afaka manararaotra sy hifehezana ny hafa tsy nanana fahefana toa ny azy. Noho izany, alohan'ny ahafahana manadihady ny ho avy ny olona ary milaza mialoha ny zava-mitranga amin'ny ho avy, dia tsy maintsy efa nandresy ny fitsiriritana, ny hatezerana, ny fankahalana ary ny fitiavan-tena, ny fanirian'ny eritreritra, ary tsy maintsy ho voarohirizin'ny zavatra hitany sy vinavinainy. Tsy maintsy afaka amin'ny faniriana rehetra na fananana an'izao tontolo izao izy.